`Data File` xWebsiteObjectType `Native Document`]]> `Data File` xWebsiteObjectType `Native Document`]]> `Data File` xWebsiteObjectType `Native Document`]]> `Data File` xWebsiteObjectType `Native Document`]]> Su?aalaha joogtada ah ee ku saabsan Tirakoobka sanadka 2010ka - City of Minneapolis
2010 Census Schedule
Minneapolis 2010 Census News
Guddiga xisaabinta dhamaystiran
Su?aalaha joogtada ah ee ku saabsan Tirakoobka sanadka 2010ka
General Demographic Characteristics by Neighborhood
Race and Ethnicity by Neighborhood
1990 to 2000: General Demographic Characteristics by Neighborhood
1990 to 2000: Selected Economic Characteristics by Neighborhood
1990 to 2000: Population by Race and Ethnicity for Minneapolis
1990 to 2000 Population Change by Neighborhood
1990 Race and Ethnicity by Neighborhood
Selected Housing Characteristics by Neighborhood
Home > Minneapolis Census > 2010 > Somaaliga
Su’aalaha joogtada ah ee ku saabsan Tirakoobka sanadka 2010ka
Muxu yahay Tirakoobka?
Tirakoobka wa xisaabin lagu sameeynaayo dadka ku nool dalkaan maraykanka. Dawladda Maraykanka 10kii sano mar bay sameeysa Tirakoob. Tirakoobka in la sameeyo waxa dhigaya sharciga u degsan dalka Maraykan ka.
Maxay muhiin u tahay in dadka la tiriyo?
Wa waajib in la tiriyo qof walba. Lambarada caddeynaye tirada dadka waxay ku lug yeelanaysa ama ay saameynaysa deeqda la siin-laha mujtamacyadeena xaga Nabadgelyada, Waxbarashada, iyo xafiisyada qaabilsan helitaanka waxyaabaha aad u baahanatay adiga iyo reerkaada.
Waxa laga qiyaasqaadanaya inta kuraasta Golaha Congresska Mareykanka uu Gobolkasto helaayo. Gobolka Minnesota waxuu ku leeyahay Golaha Congresska Maraykanka sideed kursi. Tirakoobka 2010ka waxa laga go’aansanaya inta kurasood ee Golaha Congresska Maraykanka Gobolka Minnesota uu ku yeelandoona tobanka sano ee soo socda. Sanadkaan waxa ka dhiman 2.000 qof oo kaliya oo aan ku waynkarno ama ku luminkaro hal kursi ee Golaha Congresska Maraykanka.
Goorma Tirakoobka la qabanaya?
Tirakoobka 2010ka waxu dhicidoona bisha April 1, 2010. Waxa loo diridoona suaalo cinwaan kasto ee waddanaka ku yaalla. Xafiiska Tirakoobka ee qaabilsan dawladda Maraykanka asagoo la kaashanaya dawladaha hoose waxay kawada shaqeeynayaan in la helo cinwaanada oo dhan.
Sidee Xafiiska Tirakoobka Maraykanka uu noo xisaaba?
Warqadaha qaabilsan Tirakoobka aya la diraya seddex todobaad ka hore maalinta loo yaqaano Maalinta Tirakoobka: April 1, 2010. Dadka loo diray foomka Tirakoobka intay soo buuxiyaan kana soo jawaabaan su’aalahaasi ku qoron foomkaasi ayey did ugu soo dirayaan xafiiska Maraykanka u qaabilsan Tirakoobka.
Reeraha aan ka soo jawaabin waxa wicidoona ama booqandoona shaqaalaha ka tirsan xafiiska dadka tiraya illa bisha Luulyo 2010ka.
Warka aan bixiyey ma ahaanaya mid aan qofna lala wadaagin?
Ha, Xafiiska Maraykanka u qaabilsan tirinta dadka, sharci ahaan wa in u ilaaliyo warkaada khaas ah iyo in aan qofna lala wadaagin. Qofna lalama wadaagikaro xita dawladda, oo ka mid ah Immigrashanka, Xafiiska guryaha qaabilsan, iyo xafiisyada kale. Hadii aad u baahato faafaahin dheeraad ah oo ku saansan xajinta illalinta akhbaartaada iyo online privacy waxaad gasha www.census.gov/privacay/
Tirakoobka saxan waxuu ku xiran yahay hadba sidaad gacan u siiso iyo in aad aaminto ama aad daacad u noqoto, Xafiiska Maraykanka u qaabilsan Tirakoobka waxuu ku ballan qaadaya in uu ilaaliyo xafidaada warka aad siisay. Waxii faahfaahin dheeraad ah ee ku saabsan fiiri Xafiiska Maraykanka Tirakoobka u qaabilsan xafidaada.
Sidee baan ku helikara war dheeri ah?
Warka ku saabsan Tirakoobka 2010ka ee Minneapolis markasto waxa lagu soo qoraya bogaan. Waxa kale aad e-mail u dirikarta [email protected].
War dheeri ahna waxaad ka helikarta websiteka www.census.gov/2010census/